Semalt Expert: Kubviswa kweIndaneti IP Kubva Google Analytics
Vatungamiri vepaIndaneti munguva ino ye SEO vanoziva kuve neGoogle Analytics sechishandiso chekuongorora webhusaiti yepaji . Inopa data inokosha yakakosha kumabhizimisi pamusoro pekubatana kwevatengi vekuInternet. Zvichiitika, munhu haagoni kugutsikana nekururama kwe data iyi inokosha sezvo vamwe vashandisi vanongoshanyira mawebhusayithi kuti vawane mamwe mashoko vasina kutenga chero chinhu.
Zvisinei, Igor Gamanenko, the Semalt Mutengi Wakabudirira Mutapiriri, anoti kana iwe uchida kutsigira kunyatsobvunzwa kwemishumo yako, unofanirwa kuongorora zvinyorwa zvose zvekuita kuitira kuti mhemberero dzinogadzirwa dziratidze chete yewebhu vashanyi - small business it consultancy. Zvinoshamisa kuti, Google Analytics inyoresa zvakare kuvhara kuedza kunoitwa nomutungamiri kunyange zvazvo vasina kumbobvira vatora chimwe chinhu kunze kwekugadzirisa. Saka, mutungamiri anofanirwa kuzvichenesa kubva kuGoogle Analytics kuburikidza nekudzivirira nzvimbo yedunhu reIndaneti kubva kuGoogle Analytics. Tisati taona kuti tingaita sei izvi, tinofanira kunzwisisa kuti Internet Protocol (IP) inoshanda sei. Chimwe chigadzirwa chemagetsi chinoshandiswa kuwanika paIndaneti ine kero yake yega ye IP yakasiyana. Iwe uchafanirwa kuwana mapeji eP yezviyero zvose zvinoshandiswa kupinda muwebsite uye Google Analytics.
Nzira iri nyore uye yakajairika yekuwana yako IP address irikutsvaga "chii chandingaita paIndaneti" pane zvinjini zvakadai seGoogle. Iyo IP address nhamba inouya mune zvikamu zvezviitiko zvinotevera zviri kumusoro kwewebhu peji. Iwe unofanirwa kukodha aya ma kero kero ye IP yekutsvaga. Dzokera kuGoogle Analytics account, tora pa 'Admin' tab pane chikamu chepamusoro peji. Pane pane 'Filters' chikamu mumutsetse wechitatu pane kurudyi-kurutivi rwewebhu. Sarudza 'Futa' uye upedze danho rokupedzisira rekusika iyo firisi uchishandisa '+ New Filter' sarudzo. Iwe unenge uchidaidzwa kutumidza firiji itsva.
Panguva iyi, unoda kugadzirisa firiji. Pane 2 firisi yekugadzirisa kusarudzwa; 'Kufananidzirwa' uye 'Tsika.' Zvadaro, sarudza pakati pe "Svinura" uye 'Itai' iine IP kero.Kuva kwedu, iwe uchadikanwa kutsanangura nzvimbo kana kuti nzvimbo yekuenda kwemugwagwa kuti usabvisa kana kusanganisira. Tinovimba nemashoko ekugadzirisa kodeti saka sarudza 'Chirevo' chisarudzo uye mumvura inotevera inodonha pasi menyu chengetedza pa "izvo zvakaenzana." Mhinduro inogumira ichakumbira iwe kuratidzira kero yePI yedhiyo yakatsvaga yapfuura.Gumisa basa nekudhonza pa "Save" sarudzo kuitira kuti sarudzo ishande Izvi zvinosanganisira kushandiswa kana kubvisa kunze kwekombikiti imwe chete ye IP Kana ukashandisa zvigadzirwa zvakasiyana-siyana uye saka une dzakawanda maIndaneti kuti usabvisa, unofanira kudzokorora matanho ose ataurwa pamusoro apa.
Kana kero dze IP dzisingabvumirwi kubva kuGoogle Analytics, wakasununguka kutarisa pawebsite yako pasina kunyunyuta kwekutumira spam kuratidza mumishumo. Iyo data iyo inochengetedza iko zvino yakarurama uye inomiririra basa revanhu.